Rooney oo ugu dambeyn daaha ka rogay weeraryahankii ay isugu FAHANKA fiicnaayeen! – Gool FM
Rooney oo ugu dambeyn daaha ka rogay weeraryahankii ay isugu FAHANKA fiicnaayeen!
(Manchester) 07 Feb 2018. Weyne Rooney waxa uu sheegay weeraryahankii ay isugu fahanka wacnaayeen waayihiisa in uu ahaa Carlos Tevez oo ay wada joogeen Manchester United.
Weeraryahanka waxa uu la soo dheelay ciyaaryahano tayo leh intii uu u ciyaarayey United, Everton iyo England.
Hase ahaatee, marka laga yimaado SI SHARAF LEH IN UU U MAGAC DHABAY Louis Saha, Rooney waxa uu amaanay Tevez oo 34 gool u dhaliyey United 99 kulan oo uu u ciyaaray mudaddii u dhexeeysay 2007 ilaa iyo 2009.
32 jirka waxa uu u sheegay Sky Sports: “Carlos Teves ayaa noqonaya lamaanahayga aan doorbidayo. Aad ayaan isugu habbooneyn kulamada. Louis Saha cajiib ayuu ahaa sido kale laakiin, Tevez iyo aniga waan isu shaqeyn jirnay waana is garab istaagi jirnay. Wuu iga hormari jiray anna gadaashiisa ayaan istaagi jiray.
“Mar walba waan xusuusan, waa qasab masiibo ayey ku ahayd daafacyada in ay na wajahaan. Marka aynaan haysan kubadda iyaga ayaan abbaari jirnay.
“Markii uu nagu soo biiray hadal badan oo ku saabsan in aan wada dheeli Karin ayaa jiray. Markiiba waan isla qabsannay si fiicana waan u wada dheelnay. Runtii waan ku raaxeystay la ciyaariddiisa.”
Waa sidee xiriirka ka dhexeeya Saalax iyo Mourinho?
Alexis Sanchez oo aqbalay xabsiga 16-ka bilood ah ee lagu xukumay